Umkhiqizi Wokuqandisa Kwezentengiso | Nenwell-China
dala inani elikhulu kunemikhiqizo
I-Nenwell inohlu olubanzi lwemikhiqizo yesiqandisi esebenza kakhulu futhi eyonga amandla ukuze ihlangabezane nanoma yiziphi izicelo zakho ezikhethekile.
Isipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-20 esiqandisini sifakiwe. I-Nenwell ihlinzeka wonke amakhasimende ngezixazululo ezisebenza kahle nezinembayo endaweni yesiqandisi nehhotela. Sihlala sigcwalisa isithembiso sethu "Sokudala inani elingaphezu kwesifiso sekhasimende".
Ukuze ube ngaphambi kweMakethe
Njengomkhiqizi wesiqandisi ochwepheshile, uNenwell unombono obanzi nomuzwa ozwelayo embonini, sinekhono elihle lokusungula izinto ezintsha ocwaningweni nasekuthuthukisweni ukuze sinikeze amakhasimende ethu izixazululo ezinhle kakhulu zesiqandisi.
Umbono Wamazwe Ngamazwe, Thinta Ugqozi
Ukubamba iqhaza ezinhlotsheni ezahlukene zemishini yamahhotela ngamazwe kanye nemibukiso yeziqandisi minyaka yonke. Lokhu kusenza sibe ngochwepheshe kakhulu futhi sizwele kumathrendi emakethe.
ukuthengwa kwempahla kwamanye amazwe,
ukudayiswa okushisayo komhlaba jikelele!
Amandla okuthenga amazwe ngamazwe avumela u-Nenwell ukuthi ancome futhi abonise imikhiqizo edayiswa kakhulu emhlabeni wonke kumakhasimende ethu ngesikhathi, abanike uhla olukhudlwana lolwazi oluvela kuqala lwesiqandisi esithengiswayo. Ukusiza amakhasimende ukuthi athathe amathuba ebhizinisi okuqala.
ukubambisana fakaza amathuba angenamkhawulo !
umthunzi we-pole fan motor
i-wire tube condenser
shintsha ukukhanya komnyango
Ukuthengwa kwemakethe okusebenza kahle kakhulu namandla okusesha -----500 Abahlinzeki abasebenzisana nabo abanemikhiqizo yesiqandisi nezinsiza ezingaphezu kuka-10,000. Kubandakanya izinto zasendlini, izingxenye kanye nempahla eluhlaza.
Njengoba sekuyiminyaka yokuzijwayeza nokuhlangenwe nakho, inani elikhulu lezinketho zesiqandisi sokuhweba kanye nokuhlaziywa kwemboni okunembile kunikeza u-Nenwell ukukhetha okusheshayo ukuncoma imikhiqizo yesiqandisi efanelekile kakhulu eluhlaza okonga amandla. Ukuthuthukisa ukunethezeka komkhiqizo, yonga abasebenzi nendawo! Dizayina izithombe zokudweba ukuze amakhasimende anikeze isixazululo esingcono kakhulu.
Yakha ikusasa eliqhakazile nge
Izikhathi eziyi-10 zokuthengisa eminyakeni emithathu
Eminyakeni edlule, abakwaNenwell bebelokhu behlinzeka ngeziphakamiso ezisebenzayo zokuthuthukiswa kwemakethe kumakhasimende ahlukene, bahlakulele amakhasimende ulwazi lwemikhiqizo yeziqandisi, besiza amakhasimende ukuthi asheshe athathe isabelo semakethe! Amanye amakhasimende ethu azuze ukukhula kokuthengisa ngokushesha esikhathini esifushane ngokubambisana no-Nenwell!
Njengomkhiqizi wesiqandisi we-OEM ne-ODM, siyaziqhenya ngalokhu futhi sithatha lokhu ukuze sibuyisele emphakathini ukunakekela i-Nenwell. Impumelelo yebhizinisi lethu isekelwe ngokuqinile ekwethembekeni, ukwethembeka, ukwethembana nokuhloniphana phakathi kwawo wonke amalungu enkampani, amakhasimende ethu kanye nozakwethu bebhizinisi. Ngokubona ukubaluleka kobambiswano, sakha izibopho eziqinile namakhasimende ethu nabaphakeli bethu, sigxile ekukhuleni okufanayo nempumelelo.